Raiisul wasaaraha Soomaaliya oo Hadiyad Gaarsiiyay Ciidan Latababarayo – SBC
Raiisul wasaaraha Soomaaliya oo Hadiyad Gaarsiiyay Ciidan Latababarayo
Boqolaal ka tirsan ciidamada Dowlada Federaalka Soomaaliya oo uu tababar ugaga socdo xero ku taala deegaanka lagu magacaabo jasiira ee duleedka ka xigta magaalada Caasimada ah ee Muqdisho ayaa maanta la gaarsiiyay hadiyad uu u diray Raiisul wasaaraha Soomaaliya.
Hadiyada lagaarsiiyay Ciidankan lagu tababarato xeradaasi ayaa waxaa ay ka koobneyd xoolo nool siiga Geella taas oo loogu talagalay in ciidanka loo qalo .
Waxaa lagu tilmaamay Hadiyadan mid dhiiragelin u ah ciidanka ku biiri doona kuwa Amaanka Dowlada Soomaaliya ee iminka tababarka loogu wado.
Saraakiil ka tirsan Xafiiska Raiisul wasaaraha Soomaaliya ayaa gudoonsiiyay masuuliyiinta xerada Tababarka ay ku jiraan Ciidankan Hadiyadan uu ugu talagalay Raiisul wasaare Cabdi Shirdoon Saacid.
Waxaa ka mahadceliyay oo ku tilmaamay Hadiyadan mid dhiiro gelin u ah Askarta loona baahanyahay in madaxda dalka ay sii wadaan xubnaha ugu sareeya xerada tababar ee ay askartani ku jiraan .
Faandhe Jaamac Kaarshe waa Taliyaha Xarunta Tababarka ee ku taala deegaanka Jasiira waxaana uu sheegay in ciidanka tababarka loo wado ee ku jira xerada ay aad ugu baahnaayeen caawinta ceynkan oo kale ah, marka laga yimaado dhiiro gelintana loo baahan yahay Madaxda iyo masuuliyiinta kaleba in ay ogaadaan lana garabtaagnaadaan ciidankan Taakuleynta ceynkan oo kale ah.
Sikastaba ha ahaatee waxay noqoneysaa markii ugu horeysay oo qaar ka mid ah madaxda Sar sare ee Soomaray Soomaaliyaa waxii ka dambeeyay Bur burkii ay hadayad ceynkan oo kale ah gaarsiiyaan askay tababar uu u socdo.